Danjire Nicholas Kay oo Somaliland iyo Puntland ugu baaqay inay xaaladda dejiyaan – Geeska Afrika Newspaper | Hargeisa, Somaliland
Danjire Nicholas Kay oo Somaliland iyo Puntland ugu baaqay inay xaaladda dejiyaan
Published on Mar 25 2014 // Warar
bHargeysa(Geeska)-Qaramada Midoobay ayaa dawladda Somaliland iyo maamul goboleedka Puntland ugu baaqday inay ka dheeraadaan isku dhac sababi kara dagaal, marka la eego dhaqdhaqaaqyada milatari ee ka taagan sida ay sheegtay gobalada Sool iyo Sanaag.
Ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan Somaliland iyo Somaliya Danjire Nicholas Kay, oo shalay khudbad u jeediyay Midowga Afrika, gaar ahaan golaha amniga iyo nabadgelyada, ayaa khudbadiisa oo u badnayd dagaalada Somaliya ku dhex maraya Midowga Afrika oo caawinaya dawladda Somaliya iyo Al-Shababa, wuxuu qaybta dambe kaga hadlay dhaqdhaqaaqyada Milatari ee u dhexeeya Somaliland iyo Puntland, ka dib booqashadii uu Madaxweyne Siilaanyo toddobaadkii hore ku tagay magaalada Las-qorey. “Waxa kale oo aan ka walaacsanahay dhaqdhaqaaqyada milatari ee u dhexeeya Somaliland iyo Puntland ee ka jira gobalada Sool iyo Sanaag.” Ayuu yidhi Danjire Nicholas Kay, waxaanu isagoo labada dhinac la hadlaya uu yidhi, “Waxaan ugu baaqayaa inay aad u taxadiraan oo ay ka fogaadaan isku dhac.”
Hadalkan Nicholas Kay, ayaa ku soo beegmaya laba maalmood ka dib markii uu wasiirka gaashaandhiga Somaliland Md. Axmed Xaaji Cali (cadami) ku eedeeyay maamulka iyo madaxweynaha Puntland inay gobalka Sanaag ka wadaan dhaq-dhaqaaqyo Milatari, isagoo cadeeyay inay Somaliland talaabadaas Puntland kaga jawaabtay dhaqdhaqaaqyo Milatari.
Somaliland iyo Puntland ayaa hadalo kul-kulul warbaahinta isu marinayay tan iyo markii uu Madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo safarka ku tagay magaalada Lasqorey ee gobalka Sanaag ee Somaliland, kaas oo uu mamaul goboleedka Puntland ka cadhooday.a